Otu esi edozi nsogbu nke ọghọm na Instagram mgbe ị na-ebugote ọdịnaya | Gam akporosis
Instagram nwere nwere n'afọ ndị gara aga usoro nke akwụkwọ akụkọ nke buliri ahụmịhe onye ọrụ ọ na-enye ọtụtụ nde mmadụ gburugburu ụwa. Na Akụkọ banyere Instagram Ọ bụ ihe ọzọ nke ọrụ ọhụrụ ndị ahụ jisiri ike mee ka ndị ọrụ nde mmadụ 150 jikọta ọnụ na ọnwa ole na ole na-abanye kwa ụbọchị iji hụ akụkọ banyere ndị enyi na ezinụlọ ha.
Ngwa a alọghachitela n'ihu na awa 24 gara aga n'ihi mechie ma ọ bụ mechie mmechi nke ngwa ahụ mgbe ha na-anwa bulite onyonyo na akụkọ Instagram. Njehie nke yiri ka nwere azịza yana ma ndị gam akporo ma ndị ọrụ iOS na-ata ahụhụ. Anyị ga-ekekọrịta otu anyị ga - esi edozi ya ozugbo.
O yiri ka ahụhụ ahụ bilitere na mmelite ikpeazụ. Ọ dịghị mfe ịmegharị ya na ụdị nke gam akporo 10.4.0 ma ọ bụ nke iOS 10.4.1, mana enwere ọtụtụ ndị ọrụ kọọrọ na site na ịpị bọtịnụ "+" Ibu Ibu ọdịnaya, ọ na-eme na ihuenyo na-agba oji maka ntabi, dị nnọọ mgbe inopportune shutdown ma ọ bụ okuku eme ozugbo.
Instagram nwere tinye aro ole na ole iji nwee ike idozi nsogbu a nke bilitere n'oge awa ikpeazụ site na blọgụ nke ya yana nke ị nwere ike ịnweta site na njikọ a.
Na gam akporo: ị ga-ewepụ ma wụnye ngwa ahụ, banye ma gbalịa ọzọ ịbubata ọdịnaya ịchọrọ
Na iOS: gbalịa ịmalitegharịa ngwaọrụ gị wee malite ngwa ọzọ. Ọ bụrụ na nke a anaghị arụ ọrụ, ị ga-agbaso usoro gam akporo
Ọ bụrụ na ihe niile a anaghị arụ ọrụ, naanị ihe fọdụrụ bụ na chere ka Instagram dozie nsogbu ahụ nwere mmelite ọzọ. Gị onwe gị kwa pụrụ ime otú ahụ kpesa ahụhụ ahụ iji nyere Instagram aka ịchọta azịza mbụ.
Instagram nke nwere akwa nne ọkụkọ na Akụkọ banyere Instagram ma ọ dị ka ọ nwere nsogbu na obere ahụhụ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Etu esi edozi mmechi nke Instagram ma ọ bụrụ na ị na-ata ahụhụ ya na awa ikpeazụ